Shirkada Somtel oo toddobaadkii 10aad abaalmarisay 1000 macaamiil (Sawiro) - Jowhar somali news leader
Shirkadda Isgaarsiinta Somtel ayaa abaalmarisay ku dhawaad 1000 macaamiil Todobaadkii 10aad Munaasabad Lagu qabtay beerta nabada ee Magaalada Muqdisho.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Xildhibaano,Gudoomiyayaasha Degmooyinka Gobalka banaadir qaarkood, Ururada dhalinyada ,Ururada bulshada rayidka Mas’uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta somtel,.
Waxaa sidoo kale Munaasabada ka hadlay Madaxa waaxda ganacsiga somtel Mudane; C/laahi Cali Caamir oo aad u bogaadiyay kaalinta shaqo abuurka shirkadda isgaarsiinta somtel
Waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay daahir Mxamed Maxamuud oo ku guuleystay bajaaj todobaadkan.
Munaasabada abaalmarinta kun macaamiil
Saciid Deni oo ku baaqey in lagu taageero Rooble qabashada doorashooyinka